Wararka - Xafiiska Veritas wuxuu ku sameeyaa baaritaanka sanadlaha ah ee 'ISO Audit' Warshadda Tongke Flow
Shanghai Tongke Flow Technology Co., Ltd. waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo diiradda saareysa R&D iyo soo saarista soosaarida dareeraha iyo alaabada tamarta keydinta dareeraha, isla markaana bixiyaha xalalka keydinta tamarta ee shirkadaha. Ku xidhan Shanghai Tongji & Nanhui Science Hi-tech Park Co., Ltd, Tongke waxay leedahay koox farsamo khibrad leh. Iyada oo leh awood farsamo oo adag Tongke waxay ku sii socotaa hal-abuurnimada waxayna samaysay laba xarumood oo cilmi-baaris ah oo ku saabsan "bixinta dheecaanka wax ku oolka ah" iyo "kontoroolka tamarta keydinta korantada".
Xuquuqda hantida, sida "SPH taxane tayo sare leh oo isdabamarin heer sare ah" iyo "super high voltage voltage pumping pump pump system" isla waqtigaas Tongke waxay horumarisay tikniyoolajiyadda in kabadan toban bambooyin dhaqameed sida matoorrada taagan, mashiinka quusin kara, bamka nuugista iyo mashiinka kala duwan ee loo yaqaan 'multistage pump centrifugal pump', oo si weyn kor ugu qaadaya heerka farsamada guud ee khadadka alaabada dhaqanka.
Warshaduhu dhammaantood way dhaafeen shahaadada BV ee loo yaqaan 'ISO 9001': 2015, shahaadada nidaamka tayada leh ee ISO 14001 iyo badeecooyinka shatiga loo leeyahay ayaa loo dhoofiyey in ka badan 20 dal.
Shahaadada ISO 9001 waxay muujineysaa awooda warshadeena inay si isdaba joog ah ula kulanto ugana gudubto rajada macaamiisha. Sababtaas awgeed, iibsadayaal badan ayaa u baahan alaab-qeybiyeyaasha inay ka helaan shahaadada ISO 9001 si loo yareeyo halista ay u leeyihiin inay iibsadaan wax soo saar ama adeeg liita. Ganacsi ku guuleysta shahaadada ISO 9001 wuxuu awood u yeelan doonaa inuu gaaro horumarin la taaban karo oo ku saabsan waxtarka ururada iyo tayada wax soo saarka iyadoo la yareynayo qashinka iyo khaladaadka, iyo kordhinta wax soo saarka.
Nidaamka Maareynta Tayada ee ISO 9001 waa heerka ugu caansan adduunka ee hagaajinta tayada, iyadoo in ka badan hal milyan oo hay'ad sharciyeysan ay ku leedahay 180 dal oo adduunka ah. Waa heerka kaliya ee 9000 qoys ee heerarka ay daabacday Hay'adda Caalamiga ah ee Heerarka (ISO) ee loo isticmaali karo ujeeddada qiimeynta waafaqsanaanta. ISO 9001 sidoo kale waxay u adeegtaa aasaas u ah heerar kale oo muhiim ah oo gaar u ah waaxda, oo ay ku jiraan ISO 13485 aaladaha caafimaadka), ISO / TS 16949 (baabuurta) iyo AS / EN 9100 (aerospace), iyo sidoo kale heerarka nidaamka maamulka ee sida ballaaran loo isticmaalay sida OHSAS 18001 iyo ISO 14001.